Inkonzo ye-China eyongeziweyo ngexabiso kunye ne-arhente | Ilanga
Zithengise ngokwakho ngeeNkonzo zethu ezongezwe ngeXabiso!
1. Ukongeza ukongeza kokuthengisa ukukholisa kunye nokugcina abathengi bakho.
2. Ukupakisha iimveliso zakho kwiibhokisi ezenziwe ngokwezifiso, kwisitayela sakho osithandayo.
3. Ukubamba kunye nokudibanisa kukhulisa ukuhambisa kwakho kunye nokwenza lula inkqubo yokuhambisa.
4. Ukuhlawulwa kweLableling yinkqubo enobunzima kodwa kubalulekile ukuze siyithathele indawo, kwaye sibeka iilebhile ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukubonakala kweemveliso zakho.
Kule marike ihamba ngokukhawuleza, apho umjikelo wobomi bemveliso usiba mfutshane kwaye abathengi baneentlobo ngeentlobo zeempawu abanokukhetha kuzo, ixesha-ukuya-kwintengiso kubaluleke kakhulu kwaye liza kuchonga impumelelo yenkampani.
I-Sunsonexpress Supply Chain Services (i-SCS) ibonelela ngeenkonzo zokugqibela zokuphela kweenkonzo kwi-OEM's (Abavelisi bezixhobo zoqobo), i-ODM (abaYenzi boYilo boqobo), i-EMS (ababoneleli beenkonzo zeMveliso ye-Elektroniki) kunye nabavelisi bamacandelo e-elektroniki, ibenza ukuba bakwazi ukwandisa imixokelelwane yabo yokubonelela. .
Njengomhambisi wehlabathi, ii-linecards zethu ezibanzi zibonelela abathengi ngamava "e-shop-shop" enye yoyilo kunye nokubonelela ngeemfuno zabathengi. Ubungcali nezixhobo ezisetyenziswa liQela lethu loNikezelo lweeNtengo zikuvumela ukuba wehlise indleko zakho zizonke zokufumana izinto, wandise imali yakho yokusebenza ukonwabele ubhetyebhetye bokufumaneka kwezinto, ukwandisa isabelo sakho sentengiso kunye nenzuzo.
Ukuhlawula kunye nenkonzo yearhente yokuthenga
Inkonzo ye-arhente yokuhlawula urhwebo
Sinokukunika ngenkonzo yokuhlawula simahla kumzi-mveliso.
I-Taobao.com kunye nezinye iiwebhusayithi zaseTshayina aziyamkeli iPayPal! Sikuvumela ukuba uthumele intlawulo nge-Paypal kwaye emva koko siya kuhlawula umthengisi sisebenzisa ababoneleli bentlawulo baseTshayina! Ukunikezela ngokhuseleko olukhulu ngakumbi xa uthenga kubathengisi base China!
Sisebenzisa iminyaka yethu emininzi yamava okuthenga e-taobao, siya kukucebisa malunga nokusebenza kwabathengisi kunye nezinye iingcebiso zeTaobao.com…
Sinokubonelela ngokuthenga, iarhente, ukuhlolwa, ukuhanjiswa kweemveliso kunye nenamba yenkonzo esemgangathweni eyenzelwe wena, Nayiphi na inkonzo eyongeziweyo kuwe ukuba uyafuna.
Inkonzo yexabiso elongeziweyo